ထူးဆန်းသော ဝတ္ထု (စ/ဆုံး) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » ထူးဆန်းသော ဝတ္ထု (စ/ဆုံး)	42
“ဟေ့ကောင် ဖိုးတူ၊ ဒီမနက် ဇရပ်ပေါ်မှာ ငါ တံမျက်စည်း သွားလှည်းတော့ ဘာတွေ့ခဲ့လဲ သိလား” ဟူ၍ ပြောလေရာ ဖိုးတူ ဟူသော ကိုရင်မှ -
ဟူ၍ ကိုရင်ငတက်မှ ၎င်း၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကိုရင်ဖိုးတူအား ရှည်လျားစွာ ပြောပြလိုက်လေ၏။ ထိုအခါ ကိုရင်ဖိုးတူမှ -
ထိုအခါ သူကြီးမှ “သူက ဘာတွေ လျောက်သွားတာတုံးဘုရား” ဟူ၍ လျောက်ထားလေရာ ဆရာတော်မှ -
“သူကြီးက လောဘ တက်နေပြီထင်တယ်” ဟူ၍ ခပ်ပြုံးပြုံးဖြင့် မိန့်လေရာ သူကြီးမှ -
“မဟုတ်ရပါဘုရား၊ တပည့်တော်က သိချင်ရုံပါ ဘုရား” ဟူ၍ ပြုံးပြုံးနှင့်ပင် ပြန်လည် လျောက်ထားလေ၏။ ထိုအခါ ဆရာတော်မှ -
ထိုအခါ သူကြီးဖြစ်သူမှ “ဘယ်လို အိပ်မက်များတုန်း ဘိုးသူတော်ရဲ့” ဟူ၍ မေးလေသည်။ ဖိုးသူတော်မှ -
“ဘယ်လို ရာဇဝင်လဲ ဘိုးသူတော်ရဲ့၊ ရာဇဝင်ဆို ကျုပ်က တအားစိတ်ဝင်စားတယ်” ဟူ၍ ဖိုးသူတော်၏ ဘေးတွင် ရှိနေသော လူကြီးတစ်ဦးမှ ပြောလေ၏။ ထိုအခါ ဘိုးသူတော်မှ -
ထိုအခါ လူကြီးတစ်ဦးမှ “ဒီလိုဆို လူကြီးကို ချောက်ထဲကို တွန်းချပြီး သတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ အိပ်မက်ကြီးက အမှားကြီးပေါ့” ဟူ၍ ပြောလိုက်လေရာ ဖိုးသူတော်မှ “ဦးကြီးကလည်း ရမ်းပြီး အမှားထင်တော့တာပဲ၊ ကျုပ်စကား မဆုံးသေးဘူးလေဗျာ၊ ကျုပ် ပြောမှာက ခေါင်းဖြတ် သတ်ခဲ့တာလို့ ဆရာတွေက မပြောခဲ့ပါဘူးလို့၊ ခင်ဗျားတို့ သိထားသလိုပဲ ချောက်ထဲကို တွန်းချပြီး သတ်ဖို့ လုပ်ခဲ့တာပါလို့၊ အဟဲ” ဟူ၍ ဖိုးသူတော်မှ အရွှန်းဖောက်လိုက်လေသည်။ ထိုအခါ သူကြီး ဖြစ်သူမှ “ဖိုးသူတော်ကလည်း အရေးထဲ ပြောင်လိုက်သေးတယ်၊ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ပြောပါဦး” ဟူ၍ ပြောလိုက်လေရာ ဖိုးသူတော်မှ -
ထိုလူစုသည် မီးတုတ်များ ကိုင်ဆောင်လျက် ရွာဦးကျောင်း ဇရပ်၏ မြောက်ဘက်သို့ ထွက်ခွာ သွားကြလေသည်။ ၎င်းလူစုသည် တစ်နေရာသို့ ရောက်သောအခါတွင် ရပ်လိုက်ကြပြီးနောက် -
ယင်း အသံကြောင့် တပည့်ဖြစ်ဟန်တူသူ လူသုံးယောက်မှာ လန့်သွားကြပြီး -
ထို့ထက် ၎င်းတို့ ရှေ့တည့်တည့်တွင် တစ်ထွာသာသာခန့်ရှိ အရုပ်သုံးရုပ်ကို တွေ့ရသေး၏။ ယင်းတို့မှာ ကျားရုပ်၊ ခြင်္သေ့ရုပ်နှင့် မြင်းရုပ်တို့ပင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုအခါ သူကြီးဖြစ်သူမှ -
အရီးခင်လတ် says: မင်း တောင်မှ အချိန်ကုန်ခံပြီး ရေး နိုင်မှတော့ ဘာလို့ မဖတ်နိုင်ရမတုန်းကွယ်။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။ :P
အားပေးပါတယ်။ ချောင်းဆိုးနေရင် ကွမ်းရွက်ပုံချောင်းဆေးပျောက်ဆေး သောက်။
မဟုတ် ရင် အဲဒီ အဟမ်း .. ဟမ်း .. ဟမ်း .. က အမြဲကြားနေရတော့မယ်။ :D
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အရီးလတ် ခင်ဗျာ ..
ကွမ်းရွက်ပုံလေး သောက်လိုက်ဦးမှ … :D
မောင်ပေ says: အင်း… ဇါတ်လမ်းကတော့ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းတို့ ဒဂုန်ရွှေမျှားတို့ ရေးထားတဲ့အတိုင်း ဖတ်လို့ ကောင်းပဗျား ။ ဒါနဲ့ စိုးမောင် ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်က အခု နာမည်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး မန်းဂေဇက်မှာ စာတွေရေးနေတယ် ဆိုကလားဘဲ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ရောင်းရင်းကြီးရေ ..
ဒါနဲ့ ဥပေ ထင်သလို စိုးမောင်ဆိုတာက အံစာတုံး ဟုတ်ပါဘူးနော့ … :D
Pye Kun Zaw says: အစအဆုံးဖတ်သွားပါတယ်.. အလွန်ကောင်းတဲ့ ၀တ္တုလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ “ဖိုးသူတော်၏ စကားအဆုံးတွင်မူ တောမီးလောင်သည့်နှယ် ၎င်းတို့ရှိရာ ပတ်ပတ်လည်မှ မီးများ တောက်လောင်လာလေတော့၏။” ဆိုတဲ့ အရေးအသားစတိုင်းကို အလွန်ကြိုက်မိပါသည်။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဟုတ်ကဲ့ ..
htet way says: ကြိုက်တယ် ရေးဗျာ ဒါမျိုးတွေကို ကိုယ်လည်းရေးချင်တယ် မရသေးဘူး
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဆရာထက် ခင်ဗျာ ..
“ဒါနရှင်များ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်ရှင်” ဆိုပြီးတော့လေ .. :D
may flowers says: ခုလို အစအဆုံးပြန်တင်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ..ပထမပိုင်းကိုဖတ်ပြီး နောက်အပိုင်းတွေတော့
အလင်းဆက် says: ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ..ဆို သားက စိတ်ဝင်စားတယ်ဂျ။ ဖတ်သွားတယ် နော် ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: @မမေဖလားဝါး
သားသား .. အဲလေ .. ယောင်သွားလို့ …. :D
ကိုရင်မောင် says: စိတ်ဝင်စားအောင်ရေးနိုင်ပါပေ့ အံစာတုံးရေ….
surmi says: ကောင်းတယ် ကျုပ်ကဒါမျိုးတွေကြိုက်တာ
TTNU says: ထူးဆန်းသောမောင်အံစာရေ…
ဦးဦးပါလေရာ says: ဇတ်လမ်းဆင်ထားတာလဲကောင်းတယ်
water-melon says: download လုပ်သွားပြီအေ့
MaMa says: မဟာရာဇာကြီး-
ရလာတဲ့အထဲက ၅ပုံ၁ပုံခွဲပေးရင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2697
pooch says: မမရေ ကျမလည်း ဝေစုပါတယ်နော်။ :D
ဘဲဥ says: အဘမင်းသိင်္ခ ရဲ့ စာတွေ အလွမ်းပြေဖတ်ရသလိုပဲ
မောင်ပေ says: ဒုတိယ တစ်ခါ စဆုံးပြန်ဖတ်ရင်း
မမ အညာသူ says: ပုံပြင်လေးတွေကတကယ်ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်
ကြည်ဆောင်း says: ထူးဆန်းသောကိုအစအဆုံးအားပေးသွားပါတယ်….
lynn lynn says: ကိုမဟာရာဇာ အံစာတုံးရေ ထူးဆန်းသော အကုန်ပြီးမှပဲ စိတ်ချမ်းသာတော့တယ်။ နို့မို့ဆို ဖတ်ချင်းလွန်းလို့ စောင့်နေရတာ။ ကျေးဇူးပါပဲ။ အရေးအသားအရမ်းကောင်းတယ်။ ဖတ်ပြီးရင် ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ဖတ်ချင်နေမိအောင်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်းကို ထူးဆန်းသောကို ကြိုက်မိပါတယ်။
etone says: ကိုအံစာတုံးရေ …
ချီးကျူးပါတယ် …. ဒီလို ဂမ္ဘီရဆန်ဆန် ၀တ္တုကို လူစိတ်ဝင်စားအောင်ရေးနိုင်လွန်းလို့ရော ၊ အပိုဒ်မခွဲပဲ တထိုင်တည်း ဖတ်ခွင့်ရအောင်တင်ပေးတဲ့အတွက်ရောပေါ့ ။ အားရပါးရကို ဖတ်ပစ်လိုက်ရတယ် …. ။ စာတပိုဒ်ဖတ်လိုက်ကတည်းက … စိတ်ဝင်တစားဖြစ်အောင်ရေးနိုင်တဲ့ အရေးသားနဲ့ မျက်လုံးထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင် ဖော်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဆင်မှုကလည်း … တကယ့်ကို နာမည်ကျော်စာရေးစရာတွေအတိုင်းပဲ …. ။ အားလည်းပေးပါတယ်နော် .. နောက်ထပ်ရေးမယ့် စာများကိုလည်း စောင့်ဖတ်အားပေးပါဦးမယ် …. ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5780
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ရာဇာ အံကြီးရေ..
amatmin says: ဘိုအံရေ..
တကယ့်ကို မိုက်သဗျာ.. အခုမှ စရေးတဲ့ လက်စွမ်းတောင်.
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 910
နွေဦး says: ဤ ကဲ့သိုသော ထူးဆန်းသော ဝတ္ထုကြီးကို
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကိုနွေဦးနဲ့
same kyaw says: အစအဆုံးဖတ်ပြီးလက်မ ထောင်သွားပါတယ်။ဆက်ရေးပါ။ဖတ်ချင်စရာကောင်းအောင်ရေးနိုင်ပါပေတယ်။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ ..
Novy says: သေသူများသည် လှဲလျောင်းသည် ဟူသော သဘော ကိုယူ၍ ပထမအရုပ်အား ဆွဲကာ လှဲလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဘိုအံရေ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: I’m Creator.
So, I know how …. :D
E lo hote lar taw ma tie buu .. :D
MAUNG says: ထူးဆန်း ပါပေ့ ဆတွတ် ရယ် … အဲ ဟုတ်ပေါင် .. ဆတုံး ရယ် ဆက်ရေး ပါဗျာ ..အားပေးနေပါတယ်
Novy says: ထူးဆန်းသောဝတ္ထု (စ/ဆုံး ) ကို ဖတ်ရတာ တစ်ကယ့် စာရေးဆရာ တစ်ရောက်ရဲ့
shwe kyi says: ကို အံစာ(ခ)ကို တောက်တဲ့ရေအခုလိုရှင်းပြမှပဲသိတော့တယ်။ ရွှေကြည်လည်းသိချင်နေတာ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဒီလိုပါ မရွှေကြည်ရေ ..
shwe kyi says: အော ဂလိုကိုး ကိုအံစာကတော့ ထောင့်စေ့ပါပေ့ဗျာ။
Khaing Khaing says: ကိုကြီးအံရေ …….. တနင်္ဂနွေနေ့ရုံးပိတ်ရက်မှာ တင်လိုက်တော့ သများနောက်ကျတာပေ့ါ… ရုံးပိတ်ရက်ပေ မယ့် စိတ်က ပုံပြင်လေးဆီကိုပဲရောက်နေတယ် အင်တာနက်ဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်တိုင်းလည်း သတိရတယ် ပုံပြင်လေးကို လူကိုမဟုတ်ပါ ….. ခစ်ခစ်ခစ် ဇာတ်သိမ်းကောင်းအောင်ရေးပေးလို့ပြောလို့ စိတ်ဆိုးသေးလား …….. စိတ်ထဲရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော် တကယ့်ကိုကောင်းကောင်းလေးဖတ်ချင်လို့ …….
Khaing Khaing says: ဒါကတော့ ဖတ်ပြီးမှ မန့်တာပါ …….. ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားတာကောင်းပါတယ် ….
စကားသုံးခွန်းကို ပုံဖော်ပြီး အရုပ်ကိုလှည့် လှိူ့ဝှက်တံခါးဖွင့်လိုက်တယ်ပေ့ါလေ ….. မောင်လေးအံဇာတုံးတော်ပါ၏ (ဗျောင်း ဗျောင်း ဗျောင်း) ခင်မင်စွာဖြင့်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဟုတ်ကဲ့ပါ အမခိုင်ရေ ..
Wow says: အစအဆုံး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါဒယ်… တောက်အံချာတဲ့ရေ… :D
Comments By PostCongress - padonmar - ရာမညတံတွေးစွပ်ခဲ့ပါ နိုင်းနိုင်းစနေ - Foreign Resident - Nan Shinသစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - Foreign Resident - uncle gyiဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - Foreign Resident - padonmarဆြာအုပ်ကလိထားတဲ့ HDR - Foreign Resident - padonmarကွက်လပ်ဖြည့်စိတ်ဓါတ် - padonmarစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - padonmar - padonmarပေါင်းစု - padonmar - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - padonmar - padonmarလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - လင်းဇော် ထက်သန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - Mလုလင် - အလင်း ဆက်ကိုပေါက်(မန်းလေး)၊ ဆြာအုပ်၊ Mလုလင်3in 1 - (ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲ) - Mလုလင် - padonmarဒေဝေါ ဆိုသည်မှာ - padonmar - KZဖိုင်နယ်မှာ အပိုင်တွယ်မှာက - Myo Thant - သခင် mobileသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - nicolus agral - uncle gyiဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - Foreign Resident - ကြက်အူလှည့်အိုဘယ့် ...ခရီးသည် - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - Mr. MarGa - ko pauk mandalayခရီးသည်လေးသို့ - အလင်း ဆက် - လင်းဇော် ထက်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အလင်း ဆက် - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - မဟာရာဇာ အံစာတုံးFloral Gift - Macro Series - ကိုရင်စည်သူ - Mr. MarGaWhat are some of the unique features of e-commerce technology? - ကိုရင်စည်သူလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - နွေဦးကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ .......ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ - Mr. MarGa - padonmarEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities